China Double-jekiseni-kuumba-zvikamu Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Iyo kaviri jekiseni Kuumbwa zvikamundiyo jekiseni kuumbwa chikamu sof maviri maviri akasiyana zvinhu mune imwechete seti yeforoma, kuti uone chikamu chakaumbwa nemhando mbiri dzezvinhu. Zvimwe zvezvinhu zviviri izvi zvakasiyana muvara, zvimwe zvakasiyana muhurdware uye software, kuitira kuti uvandudze uye gungano mashandiro echigadzirwa.
Double jekiseni Kuumbwa (Multi zvinhu synchronous jekiseni Kuumbwa) chinhu chakakosha pakuumba maitiro epurasitiki zvikamu. Yakapetwa jekiseni zvikamu zvine zvakawanda zvakanaka mukuita, mhando, mutengo uye kubatsirwa. Iye zvino yave ichishandiswa zvakanyanya munenge minda yese yepurasitiki, senge zvigadzirwa zvemagetsi, maturusi emagetsi, zvigadzirwa zvekurapa, midziyo yemumba, mota, matoyi, nezvimwe,
Kaviri jekiseni ruoko rwakachengetwa
Double jekiseni kumba mudziyo zvikamu
Kaviri jekiseni kutaurirana chigadzirwa zvikamu
Transparent kaviri jekiseni mota mwenje mwenje
Double jekiseni maindasitiri mudziyo zvikamu
Double jekiseni epurasitiki zvikamu zvezvokurapa zviridzwa
1.Mhando mbiri dzezvinhu mukati meviri-jekiseni rakaumbwa zvikamu zvine yakanaka encapsulation: izvo zviviri zvepurasitiki zvinhu zvinopedzwa mune imwechete jekiseni muforoma mune imwechete jekiseni kutenderera uye hazvidi kuti zvive nemaoko kunhonga nekuisa muforoma. Zvichienzaniswa nekufukidzwa kana kuita kwetsika kupinza maitiro, inogona kudzikisira zvakanyanya kukanganisa kunokonzerwa nekusarongeka.
2. Yemukati zvinhu zveviri-jekiseni jekiseni kuumbwa zvikamu: yakasimba uye yakavimbika mubatanidzwa, ine yakanaka mvura-chiratidzo, guruva-chiratidzo uye yekuisa chisimbiso zvivakwa.
3.Iyo mbiri-jekiseni jekiseni kuumbwa zvikamu zvinogona kuita izvo zvigadzirwa zveakasiyana mavara kana magadzirirwo anosangana pamwechete, kuita zvigadzirwa zvive zvakanaka uye zvakasarudzika, uye kuhwina kufarirwa kwevatengi. uye ichave inokwikwidza zvakanyanya mumusika
4.Mushure mekubaya-jekiseni jekiseni kuumbwa, zvinhu zviviri zvine kuomarara kwakasiyana, magadzirirwo kana kuita kunogona kuumba zvikamu zvakasiyana zvezvikamu zvinoenderana nezvinodiwa, uye kuita kwakazara kunogona kuwanikwa. Zvakadai sesimba, kuputira, kubata nyaradzo uye kushanduka.
5. Mushure mekuumbwa kaviri-jekiseni, zvinhu zviviri zvakaoma kusunganidzwa nemamwe maitiro zvinogona kuitwa chikamu chakazara.
6. Iyo mbiri-jekiseni kuumbwa zvikamu zvinoumbwa zvakasiyana zvinhu muchikamu chimwe pamberi kufambisa uye kudzivisa kunamatira uye nekuwedzera gungano rezvikamu zvakawanda uye kudzikisa mutengo.
7. Iyo yekugadzira kutenderera kwekaviri-jekiseni kuumbwa ipfupi pane iyo yeimwe jekiseni kuumbwa nzira, izvo zviri nyore kuona otomatiki kugadzirwa uye yakakwira kugadzirwa kunyatsoita.
8. Muviri-jekiseni jekiseni kuumbwa zvikamu, zvakakosha zvinhu zvine mutengo wakakwira zvinogona kushandiswa pamusoro kana musimboti zvinhu kuwana yakakosha mashandiro, senge anti electromagnetic kupindira, yakakwira conductivity uye zvimwe zvinhu zvekuvandudza chigadzirwa kuita.
9.Yakapetwa-jekiseni jekiseni zvikamu zvinogona kutora akasiyana zvinhu maererano nemashandisirwo maitiro ezvikamu zvakasiyana kudzikisa mutengo wezvinhu. Semuenzaniso, iyo yakapfava zvinhu inoshandiswa pamusoro peiyo gobvu rakapedzwa chigadzirwa, iro rakaomarara zvinhu rinoshandiswa kune yepakati zvinhu zvekusangana nesimba, kana iyo inopupurika epurasitiki inoshandiswa kune yepakati zvinhu kudzikisira huremu hwezvigadzirwa.
10. Iyo yepakati zvinhu zveviri-jekiseni jekiseni muforoma inogona kushandisa yakaderera viscosity zvinhu kudzikisira jekiseni kumanikidza uye kudzikisira jekiseni kunetseka.
11. Double-jekiseni jekiseni kuumbwa zvikamu zvakakodzera kuvandudza muviri weinjiniya yemunhu: mubato kana bata pamusoro rakabatwa neruoko rakagadzirwa nezvinhu zvakapfava zvekubata nyore uye mashandiro, saka izvo zvakawanikwa zvinhu zvinoenderana neyakagadzirwa nemuviri wemunhu. Izvi zvinonyanya kukosha kumadhizaini ekurapa uye nezvimwe zvinogadzirwa nemaoko.
12. Double-jekiseni jekiseni Kuumbwa kunogona kusanganisa yakaoma uye yakapfava ma polymers, uye kunyangwe zvidiki zvigadzirwa zvinogona kupa yakanakisa nyaradzo uye kugona.
Mestech inogadzira mapurasitiki anogadzira uyo anogona kukubatsira kupedzisa maitiro ese kubva pane pfungwa kusvika kuchinhu chakapedzwa, uye uve nechokwadi chekupa mhinduro dzinodhura. Ndapota taura nesu kana uchida.
Pashure: Dhirowa repurasitiki
Zvadaro: Kaviri jekiseni simba chishandiso pekugara